सबै नाका भारतले बन्द गरोस् | Hindu Khabar
August 7, 2020 6:02 pm || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:३८ मा प्रकाशित In: Breaking news, मुख्य खबर, विचार/लेख, समाज
२०७२ सालमा भुकम्पले पीडा दिइरहेको बेला त जसो तसो नेपालीको जीवन चलेको थियो। अलिअली भएपनी बुद्धि आउँछ, कि हामी नेपालीको । खाने नुन, तेल, तरकारी जस्ता दैनिकी खाद्य पदार्थ ता इन्धन लत्ताकपडा मात्र नभएर मनोरञ्जन देखि राजनितीसम्म उहीँ भारत सङ्ग निर्भर छौ। अनि कहिले बिसादियुक्त खाद्य पठायो त, कहिले राजनितिमा हस्तक्षर गर्यो, छिमेकीले भन्दै खोक्रो राष्ट्रवाद भट्टाउछौ। २ ४ दिन भारतको बिरोध गर्दैमा मोदिको पुत्ला जलाउदैमा नेपाली आत्मनिर्भर हुदैनन्। जबसम्म भारतले हस्तक्षर र अपमान गरेको सार्वजनिक रुपमा बाहिर आउँछ, तब मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद जाग्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जस्ता कैयौ कर्णाल र लेम्दे खोला लगायत अन्य चिनद्वारा पनि कब्जा जमाएका धेरै ठाउँहरु छन।
कहिले बोल्छौ यो बिषयमा ? चाहे भारत होस या चिन तर्फका कति स्तम्भहरु गायब छन त कति दिनदिनै सारिएका छन। यो आज हामीलाई थाहा भएको होइन वर्षो अघि देखि भएपनि हामीहरु मौन छौँ सन्चो नभएको जस्तो अनुभव हुना साथ अस्पताल पुग्ने कि बिरामी भएर सिकिस्त भैसकेपछि, कुन अवस्थाना जादा चाडै निको हुन्छ, र यो हामी आफै बिचार गरौ त । हामीमा राष्टियता, स्वाभिमान र स्वाधीनता देखावटी रुपमा मात्र छ, वास्तवमा भन्ने हो भने।
नेपालमा हामी रोजगार भनेको उहीँ कम्युटर अगाडि कुर्सी बसेर वा टार्इसुट लगाएर गर्ने काम बाहेक अरु केहि जान्दैनौ । बरु आफ्नै जग्गा बेचेर बिदेश पलायन भइ कामदारको काम गर्न सक्छौ। तर त्यहि जग्गामा आधुनिक तरिकाले खेती गरे कति नाफा हुन्छ सोच्न समेत सक्दैनौ। सोचेपनि खेतीकिसानी गर्दा समाजमा इज्जत हुदैन, जति बिदेश गएपछी पाइन्छ, भन्ने सोच हावी हुन्छ। हाम्रै बुद्धि मोटो, मुख मीठो अनि शरीर अल्छी अनि हेप्दैनन त छिमेकीले ? उदाहरणको लागि, कुनै एउटा टोलमा ५ ६ घर थिए। ती घर मध्ये एउटा अत्यन्त सुन्दर अनि आकर्षक थियो ।
बिडम्बना त्यो घरवाला सदस्यहरु अत्यन्त अल्छि थिए। आफ्नो घरभित्रको हरेक सानोतिनो झगडा परे पनि छिमेकी डाक्ने गर्थे । अनि एक सदस्यलार्इ अर्को सदस्यको आनिबानी चित्त नबुझे पछि छिमेकी सँग गएर कुरा काट्ने नराम्रो बानी थियो। आफ्नो घर जग्गामा केहि नगर्ने तर छिमेकीको घरमा जस्तो काम परे पनि गर्न तयार हुन्थे। सधै कहिले कसको त, कहिले कसको गएर मागेर घर चलाउने तर आफ्नो घरमा केहि नगनेए, यसो गर्दा त्यो घरवालाका छिमेकीहरु वाक्क थिए । तर त्यो घरको सुन्दरताबाट लोभिएका पनि थिए। उक्त घर स्वर्गजस्तो आकर्षक भएपनि घरवाला सदस्यहरुले नर्क जस्तै बनाएका थिए । अब आफै सोच्नुस अल्छी घरवाला कति सम्म हेपिनु पर्छ ? त्यो उनिहरुको कर्मको फल स्वरुप थियो।
नेपालमा नारा जुलुस गरेर, आफ्नै सडक जाम गरेर अथवा घाँटी सुकुन्जेल गो व्याक इन्डीया भन्दैमा कुनै समाधान हुनेछ। अब आउने सन्ततिले पनि यहि बिषयलाई लिएर बोल्नुपर्ने परिस्थिति नआओस। हरेक कुरामा आफ्नो सरकार र दलहरुलाइ गाली गर्नु पनि दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन। मेरो देशको स्वाभिमान बलियो बनाउने जिम्मा कुनैपनी दलको वा सरकारको मात्र होइन। पहिलो जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने सोच पलाउन आवास्यक छ। अझ भनौ कुनै पनि चुनावमा पैसामा र मासुभातमा बिक्ने परम्परा अन्त्य गर्नु जरुरी छ । योग्य प्रतिनिधि चुन्नु आवश्यक छ, सरकार चलाउनको लागि । आत्मनिर्भर हुनुपर्ने छ म अनि मेरो देश। अनि मात्र पुर्खौ देखि हामी नेपाली हेप्पिदै आएको पिडाको दीर्घकालीन समाधान खोज्न धेरै सजिलो हुनेछ। मेरो आउने सन्ततिले फेरि गो व्याक इन्डीया भन्दै नारा लगाउने आवश्यक पर्ने छैन। त्यसैले भारतले सबै नाका बन्द गरोस् । अलिअली भएपनी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, भन्ने चेत आउँछ कि हामी नेपालीमा । (लेखक प्रतिभा भुसाल नेपाल विद्यार्थी संघकी नेतृ हुन।)